Toca Chiremba uye Penda Mapapiro Angu naToca Boca mahara kwenguva pfupi | IPhone nhau
Toca Chiremba uye Penda Mapapiro angu naToca Boca mahara kwenguva yakati rebei
Kana iwe uine vana vadiki kumba uye sezvo vachikwanisa kuzviita nguva dzose, uye pasina chero mhando yengozi, shandisa yedu iPhone kana iPad, zvirokwazvo pane kanopfuura kamwe chiitiko iwe unenge watenga mumwe wemitambo iyo iyo musimudziri Toca Boca anotipa mu iyo App Store. Toca Boca inotipa mitambo yevana vadiki pamba kubva pamakore matatu zvichienda mberi. Vose zvavo zvakagadzirirwa kuyedza kukurudzira vana vedu zvakasikwa kugona, iyo chero chikonzero chingatora nguva yakareba kupfuura zvakajairika kukura. Kuti ubudirire vhiki ino, mugadziri arikupa maviri emitambo yayo mahara: Toca Chiremba uye Penda Mapapiro Angu.
1 Tinya Chiremba
1.1 Main maficha Toca Chiremba
2 Penda Mapapiro Angu
Toca Chiremba mutambo unonakidza wedhijitari yevana. Wongorora varwere uye tamba zvirahwe uye minigames zvinoitika mumuviri wemunhu. Mutambo wega wega hauna muganho wenguva unogona kusunungurwa kune vadiki. Kana iwe ukabatika mumutambo, unogona kuenderera kune unotevera usina kuupedza uye kufinhwa. Yakakurudzirwa vana kubva pamakore matatu ekuberekwa. Kunge mitambo yese kubva kune uyu mushambadzi, haina in-app kutenga.
Main maficha Toca Chiremba
21 mapuzzle nemaminigames ekugadzirisa.
Anonakidza epakutanga mifananidzo inoratidza mukati memuviri wemunhu.
Kunakidzwa kurira uye mifananidzo.
Interface yakagadzirirwa vadiki.
Penda Mapapiro Angu
Mumutambo uyu, chidiki cheimba chichafanirwa kutamba nemavara akasiyana siyana kupenda mapapiro emabhurugufuru, kutora mukana weiyo symmetry. Sezvo isu patinotanga kupenda imwe yemapapiro, iro rakatarisana divi rinongoerekana rapendwa. Kusiyana nemitambo yapfuura Paint My Wings ndeyepasirese, saka chinongedzo chandinosiya pasi inoshanda kune ese iPhone ne iPad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Toca Chiremba uye Penda Mapapiro angu naToca Boca mahara kwenguva yakati rebei
Maitiro ekumisa mimhanzi kubva pakutamba patinopedza kufona (tweak)
Akapfupisa ma URL haana kuchengetedzeka, kudzidza kunowana